Sida loo rakibo Google Translate dusheeda aaladda? - LifeBytes | LifeBytes
Shabakadaha Shabakadda | | Shabakadaha
Sida loo rakibo Google Translate on toolbar? Turjumaanka google wuxuu leeyahay in ka badan 200 milyan oo isticmaale, waana gabi ahaanba nidaamyo luuqado badan oo lacag la'aan ah kaas oo aad ku turjumi karto maqalka, dukumiintiyada, sawirrada iyo, dabcan, bogagga.
Haddii aad si joogto ah ula kulanto bogag ama warar ku qoran Ingiriis ama luqad kale oo turjubaanka uusan dhaqso u dhaqaajin, Waxaan ku tusi doonaa dariiqa aad ugu haysato aaladdaada qalab si aad u haysato marka aad rabto.
1 Ku rakib Google Translate si fudud
1.1 Tallaabada 1.
1.2 Tallaabada 2.
1.3 Tallaabada 3.
1.4 Tallaabada 4.
1.5 Tallaabada 5.
2 Toos u dhig Google Translate bogagga oo dhan
Ku rakib Google Translate si fudud
Turjubaanka Google wuxuu ku leeyahay kordhin gudaha Dukaanka Shabakadda Chrome, iyo si loo helo geedi socodku waa mid aad u fudud oo dhagaxa ah:
● Tallaabada 1.
Bogga ugu weyn ee Chrome waxaad ku arki doontaa sumadda iyo magaca Dukaanka Webka Chrome, guji waxaadna ka heli doontaa dhowr ka mid ah fidinta ku yaal bogga weyn.
● Tallaabada 2.
Tag mashiinka wax -raadinta ee ku yaal guddiga bidix, oo halkaas ku qor Google Translate. Kadib markaad fuliso raadintaada, waxaad arki doontaa astaanta turjumaanka google, guji.
● Tallaabada 3.
Markaad gasho bogga Turjumidda Google ee xagga hoose waxaad awoodi doontaa inaad aragto oo akhrido astaamaha, dib u eegista, shaqooyinka, iyo xeerarka iyo shuruudaha asturnaanta ee kordhinta ay ku siineyso, iyo meesha ugu sareysa ee ikhtiyaarka ah inaad ku darto Chrome.
● Tallaabada 4.
Xulashada ikhtiyaarka Ku -darista Chrome ayaa isla markiiba bilaabi doonta soo dejinta rakibidda, goor dambe, waxaad heli doontaa digniin xaqiijin ah oo ku saabsan rakibidda barnaamijka si uu u bilaabo.
● Tallaabada 5.
Si loo xaqiijiyo in kordhinta si guul leh loo rakibay gal galka fidinta.
Toos u dhig Google Translate bogagga oo dhan
Ka dib markaad ku darto kordhinta biraawsarkaaga waxaad arki doontaa astaanta Google Translate oo ku taal guddida sare
Haddii aad gujiso astaanta waad arki doontaa taas waxaa jira ikhtiyaar oranaya "bogga turjum" Inkastoo ay tani tahay waxaan rabno, waxaan ku siin doonaa fikrad ka wanaagsan.
Tag astaanta Google Translate oo guji dhinaca midig ee jiirkaagaMarkaad fuliso ficilkan, waxaad arki doontaa liis yar oo xulashooyin ah, oo ay ku jiraan qaabeynta fidinta, guji halkaas.
Waxaa laguu diri doonaa tab cusub oo sanduuq yar uu ka muuqan doono cinwaanka soo socda: Fidinta Fidinta Chrome, iyo halkaas waa inaad doorataa luqaddaada ugu weyn (Isbaanish) oo guji keydinta.
Haddii ka dib markaad tan samayso aad gasho bogga aad rabto, iyadoon loo eegin inay tahay Ingiriis, Faransiis ama Shiine, adiga oo gujinaya astaanta iyo xulashada si loo turjumo bogga, waxay ku samayn doontaa Isbaanish, ama laga yaabee inaadan xitaa riixin astaanta, maadaama bogga si toos ah loo turjumi doono. Sidoo kale, waxaad dib ugu celin kartaa qoraalka afkiisii ​​hore.
Shaki la'aan, kordhintaan waxaad si dhakhso ah u turjumi kartaa bog kasta oo aad ku jirto luqad kasta oo aad doorbidayso
Wadada buuxda ee maqaalka: LifeBytes » Shabakadaha » Sida loo rakibo Google Translate on toolbar?
Sida loo soo dejiyo Adblock lacag la’aan?
Sidee loogu daraa fidinta Google Chrome?